Gabadh 21 jir ah oo reer El Salvador ah oo canugeeda oo mayd ah laga helay musqul ay ku dhashay ayaa lagu waayay in ay dil gaysatay ka dib markii maxkamadaynteeda lagu celiyay. – hareerley News
Evelyn Hernández ayaa markasta sheegi jirtay in aysan wax dambi ah galin, iyadoo sheegtay in aysan war u hayn in ay uur lahayd, ayna miyir daboolantay markii ay dhalaysay.
“Illaahay ayaa mahad leh, caddaalad ayaa la helay,” ayay tiri markii ay maxkamadda bannaankeeda cagaha saartay iyadoo xor ah ka dib 33 bilood oo ay xabsi adag ay ku jirtay.
“Mustaqbalkaygu waa in aan tacliinta sii wato horayna u socdo anigoo hadafkayga hiigsanaya. Waan faraxsanahay” ayay tiri sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
“Farxad ayaan la qarxi rabaa,” ayay tiri Bertha Maria Deleon oo ah qareenkii difaacaysay, waxayna arrintaas ku qortay Twittekeeda.
“Waan awoodnaa waana sii wadi doonnaa dagaalka, sababtoo ah waxaa wali jira dumar la eedeeyay oo si degdeg ah ugu baahan in ay caddaalad helaan,” ayay Twitterka ku soo qortay Deleon.
Hay’adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa xukunka maxkamadda ku tilmaantay “guul muhiim ah oo u soo hoyatay xuquuqda dumarka El Salvador” waxayna dawladda ugu baaqday in ay soo afjarto, arrinta wajigabaxa ah ee dumarka dambiile yaasha looga dhigayo.
Kulamo xasaasi ah Gaargaar iyo Waliba Goonigooni Oo xalayto ka dhacay Magalada Dhuusamareeb
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay ku hoyday Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud,halkaas oo uu garay gabaldhicii xalay,waxaana la sheegay in halkaasi u ka wado kulamo kala duwan. Wararka ay Idaacadda Risaala ee Magalada Muqdisho ay heleyso ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay Ra’iisul Wasaare Kheyre uu kulamo gooni gooni ah la […]
Madaxda Dalalka Bariga Afrika oo go’aan ka gaaraya codsi ka yimid Soomaaliya
Posted on November 10, 2019 November 10, 2019 Author Hareerley News
Madaxda dalalka ururka Bulshada Barriga Africa ayaa 30-ka November ku kulmaya magaalada Arusha ee dalka Tanzania, halkaasi oo ay ku yeelan doono kulan madaxeedkii 21-aad ee aan caadiga ah. Mid ka mid ah ajendayaasha ugu weyn ee kulanka ayaa ku saabsan Soomaaliya iyo waxa laga yeelayo codsi ay soo gudbisatay oo ku saabsan sidii ay […]